Thoracic strain (ရင်ဘတ်နှင့်ကျောလယ်ရှိ ကြွက်သားများဒဏ်ဖြစ်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Thoracic strain (ရင်ဘတ်နှင့်ကျောလယ်ရှိ ကြွက်သားများဒဏ်ဖြစ်ခြင်း)
Thoracic strain (ရင်ဘတ်နှင့်ကျောလယ်ရှိ ကြွက်သားများဒဏ်ဖြစ်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ကျောရိုးမကြီး၏အလယ်ပိုင်းရှိ ကျောရိုးုများရှိရာနေရာနှင့်ကျောလယ်ပိုင်းတို့ကို ပေါင်း၍ ရင်ဘတ်ပိုင်းဟုခေါ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုရသော် လည်ပင်းအောက်ခြေမှ စ၍ နံရိုးခွေများ၏အောက်ခြေအထိကိုဆိုလိုသည်။ ဒဏ်ဖြစ်သည်ဆိုသည်မှာ ကြွက်သားများသည် လွန်စွာ ကျုံ့ခြင်း (သို့)အလုပ်လုပ်ရခြင်း တို့ကြောင့် ပုံမှန်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်မှုအားနည်းသွားခြင်း (သို့) ပြဲသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
Thoracic strain (ရင်ဘတ်နှင့်ကျောလယ်ရှိ ကြွက်သားများဒဏ်ဖြစ်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ကျောရိုးမ၏ အလယ် ရင်ဘတ်ပိုင်းနေရာများတွင် အဖြစ်များသည်။ ထပ်မံသိရှိလိုပါက ဆရာဝန်အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။
Thoracic strain (ရင်ဘတ်နှင့်ကျောလယ်ရှိ ကြွက်သားများဒဏ်ဖြစ်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အဓိက လက္ခဏာမှာ နာကျင်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် လှုပ်ရှားမှုပြုပါက ဥပမာ-လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ် ပို၍နာတတ်သည်။
အထက်ပါ လက္ခဏာအပြင်အခြားရှိနိုင်သေးသည်။ စိုးရိမ်စရာရှိပါက ဆရာဝန်အား ဆက်သွယ်ပြသပါ။
Thoracic strain (ရင်ဘတ်နှင့်ကျောလယ်ရှိ ကြွက်သားများဒဏ်ဖြစ်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဖြစ်ရသောအကြောင်းအရင်းများမှာ ကွဲပြားသည်။ ကြွက်သားနှင့်အရွတ်များ ပြဲထွက်မသွားပါက သိပ်မပြင်းထန်တတ်သော်လည်း ပြဲထွက်သွားလောက်အောင် ဒဏ်ဖြစ်ပါက ပြင်းထန်တတ်သည်။ ဒဏ်ရာမှာ သိပ်မပြင်းထန်ပါက ကြွက်သားလျော့ရဲမှုလည်း နည်းသည်။ တခါတရံတွင်ထို ကြွက်သားများတွယ်ကပ်နေသည့် အရိုးများပါ ကျိုးတတ်သော်လည်း ရှားပါးသည်။ အရိုးပေါ်သို့တိုက်ရိုက်ထိခိုက်မိသည်ဖြစ်စေ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်းနှင့် အရိုးပျော့ရောဂါကြောင့် အရိုးများမခိုင်မာခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ဖြစ်တတ်သည်။ အလွန့်အလွန်အားစိုက်၍ကြွက်သားများအားအနားမပေးခြင်း လှုပ်ရှားမှုများတွင် အနေအထားမမှန်ခြင်းတို့ကြောင့် ကာလကြာရှည်စွာ ကြွက်သားများ ဒဏ်ဖြစ်တတ်သည်။ အဝလွန်ခြင်းမှာလည်း နောက်ကျောသို့ဒဏ်ဖြစ်စေရန် အလားအလာများစေသည်။ ချက်ချင်းပေါ်ပေါက်လာသည့် ကြွက်သားဒဏ်များမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း (သို့) အားကစားမလုပ်ခင် သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရင်ဘတ်ပိုင်းကြွက်သားများဒဏ်ဖြစ်ခြင်း၏ သိသာထင်ရှားသည့် အကြောင်းအရင်းကားမရှိပေ။
Thoracic strain (ရင်ဘတ်နှင့်ကျောလယ်ရှိ ကြွက်သားများဒဏ်ဖြစ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်မှ ရောဂါရာဇဝင်နှင့် ကြည့်ရှူကိုင်တွယ်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်လိမ့်မည်။ စဖြစ်သောအချိန်၊ဖြစ်သွားစေသည့် လှုပ်ရှား မှုများနှင့် ပိုဆိုးစေသောအကြောင်းအရင်း၊သက်သာစေသောအကြောင်းအရင်းများကို လည်းမေးမြန်းစစ်ဆေးခြင်းခံရတတ်သည်။ ဒဏ်ဖြစ်နေသည်ဟုသံသယရှိသည့် နေရာများကိုတွေ့ထိဖိကပ်၍ နာကျင်မှုနှင့် ရောင်ရမ်းနေခြင်းရှိမရှိ စမ်းသပ်တတ်သည်။ အချို့သောလှုပ်ရှားမှုများကိုလည်း ပုံမှန်အတိုင်း မည်မျှဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုသိရှိစေရန် ထိုလှုပ်ရှားမှုများကို ဆရာဝန်မှ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ပို၍နာစေသော လှုပ်ရှားမှုများနှင့် သက်သာစေသောလှုပ်ရှားမှုများကိုပါ လေ့လာတတ်သည်။ သံလိုက်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဖြင့် အခြားနာကျင်စေသောအကြောင်းအရင်းများ၊နှင့် အရိုးကျိုးခြင်း (သို့) ကျောရိုးဆစ်ပြားများထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုလည်းစစ်ဆေးရသည်။ ကြွက်သားရွေ့လျားဓါတ်မှန် (သို့)အကြောလေ့လာမှုများကို ညွှန်ကြားထားသော ကုသမှုများ မှ မသက်သာမပျောက်ကင်းစေပါက ပြုလုပ်ရတတ်သည်။
Thoracic strain (ရင်ဘတ်နှင့်ကျောလယ်ရှိ ကြွက်သားများဒဏ်ဖြစ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကာယပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုများ သည် ပျောက်ကင်းစေရန် အထောက်အကူပြုပါသည်။ ဆရာဝန်မှ မိမိအား ပြုလုပ်ရန် လေ့ကျင့်ခန်းများပေးခြင်းနှင့် ကာယကုသကျွမ်းကျင်ဆေးပညာရှင်များအား အနာသက်သာလာသောအခါ လွှဲပေးတတ်သည်။ သက်သာပျောက်ကင်းသွားပါကလည်း ကိုယ်လက်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် ပြုလုပ်ရသည့် သင့်တော်သော လေ့ကျင့်ခန်းများ နှင့်အလုပ်အကိုင်များကိုပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ အားကစားမကစားမီ သွေးပူလုပ်ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့် ကစားအပြီး အကြောဖြေလျှော့ခြင်းတို့ကလည်း အလွန်အထောက်အကူပြုပါသည်။ အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်သည့် အနာသက်သာဆေးများကိုလည်း ဆရာဝန်အားမေးမြန်း၍အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ယခုကဲ့သို့ရင်ဘတ်ပိုင်းတွင် ဒဏ်ဖြစ်ခြင်းမှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါက သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ကုသမှုနှင့် အနားပေးခြင်းတို့မှ နာတာရှည်ဒဏ်မဖြစ်သွားအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အရွတ်များပြဲထွက်သွားပါက သက်သာပျောက်ကင်း၍အကောင်းအတိုင်းပြန်ဖြစ်ရန်မှာ အရိုးကျိုးပြီးပြန်ဆက်သည့်အချိန်ပမာဏနှင့်တူညီသလောက်ရှိသည်။ သိပ်မပြင်းထန်သော ကြွက်သား ဒဏ်များအတွက်ကား ပျောက်ကင်းရန် တစ်ပတ်မျှသာကြာတတ်ပြီး ပြဲထွက်သွားသော ကြွက်သားများနှင့် အရွတ်များကား သက်သာပျောက်ကင်းရန်6ပတ်မှ တစ်လအထိကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။
ကြွက်သားဒဏ်ဖြစ်သွားသည့် နေရာသို့ရေခဲအုပ်ပေးပါ။ ရေခဲဖြင့် ဖိကပ်နှိပ်နယ်ခြင်း
. ရေခဲကို ပလပ်စတစ်အိတ်ထဲသို့ထည့်ပါ။
. သဘက်စောင်ပါးပါး(သို့) တာဝါစောင်တခုကို ဖြစ်ပွားသည့် အရေပြားနှင့် အိတ်ကြား
. 15-20 မိနစ်ခန့်ထား၍ တနေ့လျှင်3-4 ကြိမ်လောက် ဖြစ်ပွားပြီး
အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်သည့် အရောင်ကျဆေး၊အဖျားကျဆေးများကို ဆရာဝန်
အကယ်၍ ဆရာဝန်မှ ကာယကုသမှုများပြုလုပ်ရန်ညွှန်ကြားလာပါက ရက်ချိန်းထား၍
လှုပ်ရှားမှုအားထိန်းညှိပေးသည့် ကျောသိုင်းများနှင့် ကျောစည်းများကို အသုံးပြုပါ။
Thoracic Strain. http://m.sw.org/misc/health/Thoracic%20Strain.html. Accessed November 7, 2017.
THORACIC STRAIN/SPRAIN. http://www.jointventurespt.com/treatment/thoracic-strain-sprain. Accessed November 7, 2017.
THORACIC OR LUMBAR SPRAIN/STRAIN. http://elitesportstherapy.com/thoracic-or-lumbar-sprainstrain/. Accessed November 7, 2017.